Xulka Cameroon oo ku guuleystay Koobka Qaramada Africa – Puntland Post
Posted on February 6, 2017 February 6, 2017 by Desk
Xulka Cameroon oo ku guuleystay Koobka Qaramada Africa
Xulka kubadda cagta dalka Cameroon ayaa caawa markii 5-aad ku guulaystay koobka Qaramada Africa ee AFCON 2017, kadib markii uu guul soo laabasho ah ka gaadhay xulka Masar.
Ciyaarta finalka oo ka dhacday magaalada Libreville ee dalka Gabon ayaa ku soo idlaatay 1-2 oo ay guushu ku raacday xulka Cameroon.
Xulka Masar ayaa iska lumiyey gool ay qeybtii hore ee ciyaarta hogaanka ku qabteen, kadib markii Mohamed Elneny uu daqiiqadii 21-aad dhaliyey kubabad xagal ahayd. Cameroon ayaana qeybtii hore ee ciyaarta awoodi wayday in ay difaaca Masar dhaafto oo ay la timaado goolka barbaraha, ciyaarta ayaana lagu kala nastay 1-0.
Markii qeybtii labaad laysku soo laabtay ayaa xulka Cameroon helay goolka barbaraha, kadib markii uu gool madax gantaal ah u saxiixay Nicolas N’Koulou isagoo caawin ka helay Benjamin Moukandjo Bilé waxayna ciyaartu noqotay 1-1.
Cameroon ayaa dhinaca kale urogtay natiijadii hogaanka daqiiqadii 88-aad ee dhamaadka ciyaar, ka dib markii gool layaab leh shabaqa ku ruxay Vincent Paté Aboubakar, isagoo ciyaarta ka dhigay 1-2 oo ay hogaanka ku hayso Cameroon.
Xulka Cameroon oo koobka Qaramada Afrika labo final oo hore ay guuldaro kala kulmeen Masar ayaa ugu danbayn ku guuleystay.